Ị a factory ma ọ bụ a trading ụlọ ọrụ?
Anyị bụghị naanị nwere onwe anyị ụlọ mmepụta ihe ma na-enwe mbak na ụfọdụ ndị ọzọ ụlọ ọrụ.
Nwere ike ị na-enye samples?
Ee, ọ bụrụ na sample dị na ngwaahịa
Ị pụrụ ime ndokwa enwetala?
N'aka, anyị nwere na-adịgide adịgide ibu forwarder onye pụrụ inweta ihe kasị mma ọnụahịa ọtụtụ ụgbọ mmiri ụlọ ọrụ na-enye ọrụ ozi.
Ọ dabeere na iji, ejikari 15 - ụbọchị 20 mgbe na-anata ego ma ọ bụ L / C na anya.
Ị nwere àgwà akara?
Ee, anyị nwetara BV , SGS Nyocha.
100% apụghị ịgbanwe agbanwe L / C na anya. Ma ọ bụ T / T , 30% tupu, na itule megide ndeputa B / L n'ime 3-5 ụbọchị.